Xilliga ay dhaceyso doorashada Aqalka sare ee DG Hirshabeelle | KEYDMEDIA ONLINE
Xilliga ay dhaceyso doorashada Aqalka sare ee DG Hirshabeelle
33 Musharax oo Madaxweyaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen (Guudlaawe) uu shalay u soo magacaabay tartanka Aqalka sare, ayaa lagu dhaqaay xilliga ay dhaceyso doorashada lagu kala reebayo.
JOWHAR, Soomaaliya – Sida ku cad jadwalka doorashada Xubnaha Aqalka Sare ee Hirshabelle ku matalaya Baarlamaanka 11-aad ee JFS, oo ay soo saareen Guddiga Baarlamaanka ee qabashada doorashada xubnahaas, ugu danbeyn 15-ka bishaan ayaa la soo gabagabeynayaa doorashada Aqalka sare ee ka dhaceysa Jowhar.
Maanta oo Khamiis ah, ilaa Sabtiga soo socda, waxaa la soo af-meeri doonaa araaji qabashada iyo diiwaan galinta musharixiinta u baratamaya ka mid noqoshada Baarlamaanka soo socda ee Dowladda Federaalka.
12-ka September 2021, Axadda nagu soo wajahan, Baarlamaanka Maamulka Hirshabeelle, ayaa dhageysan doona hadal jeedinta Musharixiinta, halka 13-15 September, oo ku beegan Isniinta ilaa Arbacada nagu soo aadanna, la qabadn doono doorashada kuraasta Aqalka sare.
Sida la rumeysan yahay tartanka ugu adag musharaxiintan ka soo jeeda Hir-Shabeelle, wuxuu u dhaxeeyaa Muuse Suudi Yalaxow, Abdullahi Shiikh Xasan, Axmed Daaci iyo Muxudiin Xasan Afrax, kuwaas oo iskula qoran hal kursi.
Doorashada Siddeeda kursi ee Aqalka sare ee ka dhaceysa Jowhar, ayaa ka gadisan doorashooyinkii ka dhacay Kismaayo, Baydhabo, Garowe iyo Duusamareeb, kuwaas oo intooda badan loo xiray shaqsiyaad gaar ah.